RuneScape ugbu a na gam akporo gị: otu n'ime ochie MMORPG laghachiri | Gam akporosis
RuneScape bụ otu n'ime MMORPG (Multiplayer Massive Online Role Play Game) onye maara ka esi alụ ọgụ megide World of Warcraft, Ultima Online na Everquest naanị na mmalite nke narị afọ. Egwuregwu ndị mbụ ahụ nwere nnukwu ihe egwuregwu ọtụtụ nke nyere gị ohere igwu "ọrụ" ma kpọkọta otu ndị enyi n'otu ezinụlọ.
Ọtụtụ ihe mere kemgbe ụbọchị ndị a ka anyị wee nwee ike ikwu maka eziokwu ahụ bụ na ahapụla RuneScape na Playlọ Ahịa Google ka ọ theụ nke ndị na-egwu ya n'oge ahụ. Ma ọ bụ na taa enwere ụfọdụ ndị egwuregwu nwere ị gafeela afọ iri na atọ, yabụ ị ga - enweta otu mmetụta nke egwuregwu a nwere n’ụbọchị ya.
1 Emegharịrị maka mkpanaka na ikpo okwu
2 RuneScape nke mbu bu nke ugbua
3 Ọ bụrụ n’ịkpọrọ RuneScape gara aga
Emegharịrị maka mkpanaka na ikpo okwu
Na-agba ọsọ karịa egwuregwu SEGA, Jagex Games Studio agaala nnukwu ọrụ na-eweta a version n'ụzọ zuru ezu kachasị maka touchscreen ngwaọrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-ekwu maka egwuregwu enwere ike ịnụ ụtọ ya site na ekwentị iji mee ka ihe niile ọ pụtara n'oge ahụ pụta.
Ọzọ nke uru ya, maka ndị nwere akaụntụ na PC ya, bụ na ị nwere ike soro ndị enyi gị gwuo egwu maka ihe a na-akpọ cross-platform. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ n’igwu egwuregwu na PC, kedụ ebe ị hapụrụ ya, ị nwere ike soro ya site na nkasi obi ị dinara ala n’elu ihe ndina na ekwentị gị. Nke a bụ nnukwu oge maka ndị Fans nke RuneScape na PC iji gbanwee gaa na nsụgharị gam akporo na ntụgharị.
Ma ọ bụ na-egwu RuneScape site na mkpanaka gam akporo ọ ga-abụ ihe ọzọ a na-eme maka ịme egwuregwu imetu ihuenyo. Na ya n'onwe ya ọ bụ ahụmịhe na-enweghị mmachi ọ bụla, ihe a na-ejikọ ya na PC PC. Anyị na-ekwu maka egwuregwu nke eserese na 2017, ọ bụ ezie na usoro data, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ igwu egwu na 4G, gbaa 2MB kwa elekere ...
RuneScape nke mbu bu nke ugbua
Maka ndị gị na-enwetụbeghị ụwa nke RuneScape, nke a bụ ezigbo MMORPG "ụwa" bụ "mejupụtara" nke ndị egwuregwu cna ọdịnaya ndị mmepe na-emejuputa anya. Ọ bụ ndị Fans tozuru oke ọdịnaya ya ka enwere ike ijikọ ya n'ime izu ma ọ bụ ọnwa.
Karịa Ndị egwuregwu 260 gafere RuneScape ebe ọ bụ na 2001. Ndị na-egwu egwu bụ ndị nwere ike igwu egwu dị ka ndị na-achọ otuto, ma ọ bụ soro ndị dike ndị ọzọ mee akara ha na egwuregwu ahụ. You nwere ike ruo nka 23 ka ọpụrụiche ha, ọtụtụ narị ndị ọzọ na iri na abuo raids na ndị ikpeazụ bosses iwepụ.
PvP adịghịkwa enwe ma na ọtụtụ egwuregwu mgbagwoju anya iji dozie ọrụ ndị ahụ ị ga - enwe ruo mgbe ike gwụ gị ma chọọ ịmechaa ha. MMORPG zuru oke nke bụ oke ozi ọma maka ụmụazụ ya niile nwere ike ịnwe ya na gam akporo ha.
Ọ bụrụ n’ịkpọrọ RuneScape gara aga
Ọ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, ị egwuworị RuneScape, ị ga-enwe otu egwuregwu arụzi ọrụ, ndịna bụ maka ala spec profaịlụ na ị ga-izute niile NPCs si obodo ị ga-echeta. Ọzọkwa, kwadebe onwe gị maka ọtụtụ ọdịnaya ọhụụ agbakwunyere kemgbe 2013.
N'ikwu ya, enwere ndenye aha maka euro 5,69 kwa ọnwa iji nweta:
Maapụ ụwa nke ahụ bụ Ugboro 3 ka ukwuu na ndọtị.
8 nkà ndị ọzọ.
Ọtụtụ mmezi ọzọ.
400 oghere ndị ọzọ maka akaụntụ akụ.
RuneScape ọ bụ nloghachi nke otu kpochapụwo MMORPGs na gam akporo gị nwere ogo dị oke mkpa maka nnukwu ọdịnaya ọ nwere, nnukwu obodo ị ga-ahụ na-egwu ya kwa ụbọchị yana maka mmepe teknụzụ nke na-ezute atụmanya zuru oke. Anyị ekwuola na ha bụ eserese sitere na afọ iri mbụ nke narị afọ XNUMXst, mana ma ọ bụghị, site na iri.
Gịnị mezieị nwere ike ibudata RuneScape ma nwee obi ụtọ dịka dwarf nke ụwa mebere ndị egwuregwu maka ndị egwuregwu ahụ. The njem bụ n'ihi na ị na-ewere, ọ bụ gị ka ị rụọ otu ọrụ ma ọ bụ ọzọ; dị ka pụtara na Town of Salem ebe ị ga-ama nke ọma otu esi arụ ọrụ.
Nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri si PC
Ọdịnaya iji nwee ọ forụ maka ọnwa
Ihe niile bụ RuneScape na ekwentị gị
RuneScape ochie akwụkwọ
Developer: Jagex Egwuregwu Studio
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Ihe omimi MMORPG RuneScape dị ugbu a na gam akporo
Ya Halloween !!
Ọ bụghị site Samsung, ma ọ bụ site na Huawei, ma ọ bụ site na nke ọ bụla ọzọ: nke mbụ mpịachi ama bụ ukara na si Rouyu